Firenena amerikana : Matoky an-dRajaonarimampianina -
AccueilRaharaham-pirenenaFirenena amerikana : Matoky an-dRajaonarimampianina
Noporofoin’ny firenena amerikana fa matoky tanteraka ny fitondrana tarihin’i Hery Rajaonarimampianina izy ireo. Iny fanolorany ny “Vedette” mitondra ny anarana hoe “Akio” asa tanan’ny kaompania amerikana Metalshark, tany Nosy Be, omaly iny no nanamafisany an’izany. Tsy vitan’ny resabe fotsiny mantsy ny fanohanana firenena iray, fa amin’ny alalan’ny fihetsika tahaka izao.
Mendri-piderana ny ezaka nataon’ny fitondrana tamin’ny fahatrarana sambo nitondra andramena, tany amin’ny Cap Masoala, ny herinandro lasa iny. Natao indrindra hanampiana an’ireo mpitandro filaminana miaro ny harem-pirenena ity sambo haingam-pandeha ity. Mahatratra 80 km isan’ora ny hafainganam-pandehany ary manana halava eo amin’ny 13 metatra eo. Raitra dia raitra izy io, satria dia mitentim-bidy 3 miliara ariary latsaka kely.
Mbola ny filoha Hery Rajaonarimampianina irery ihany no filoha lanim-bahoaka teto sahy nihenjana sy namaky ady tamin’ny mpanondrana andramena.
Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nandray ity sambo haingam-pandeha ity tamin’ny fomba ofisialy ary nanamafy fa “anjara andraikitry ny rehetra ny fiarovana ny harem-pirenena hampisy ny fisandratana mirindra”. Taonan’ny fihazakazahana ity 2017 ity, hoy izy, ka miroso hatrany amin’ny fiaraha-mientana ho an’ny fampandrosoana iombonana isika. Efa miroso amin’izany ezaka izany hatrany ny avy amin’ny fitondram-panjakana, hoy ny filoha.
Mifaninana manamafy ny fifandraisany amin’ny fitondrana ankehitriny ny firenen-dehibe. Ho an’ny Amerikana manokana, dia saika semban-drahona tamin’ilay fitsabahany ny raharaha anatiny momba ny “Acd” sy ny “Apmf” iny ny fifandraisan’ny tany roa tonta. Haingana be anefa izy ireo namafa izany “rahona” sendra nandalo izany sahady. Tsy ny fitondran’ingahy Marc Ravalomanana ihany araka izany no mirehareha fa akaiky ny firenena amerikana tamin’ny fotoan’androny, fa ny fitondrana ankehitriny koa dia tena atokisan’ny firenena amerikana. Noho iny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 iny no nahavery ny fahatokisan’ny firenena amerikana ny mpitondra. Niverina nahazo laka indray izany amin’izao fananan’i Madagasikara filoham-pirenena voafidy tamin’ny fomba demokratika izao.